विकासका लागि मिल्दैन खुट्टा कमाउन | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ जेष्ठ ३, बिहीबार १२:०८ गते
औँलामा क्यान्सर रोग लागेको छ र काटेर फ्याँक्दा ज्यान बाँच्छ भने औँला काट्न तयार हुनुपर्छ । एउटा खुट्टा काट्दा जीवन सुरक्षित रहन्छ भने खुट्टा काट्न पनि तयार हुनुपर्छ । भौतिक समृद्धिका लागि बाटो चौडा बनाउने कामका लागि केही जग्गाजमिन काटिन्छ वा क्षति हुन्छ भने वा घरै भत्किन्छ भने पनि देशको भौतिक विकासका लागि नागरिकहरुले सहनुपर्छ । देश विकासका लागि कष्ट सहन तयार हुनुपर्छ । तर, यसको अर्थ यो कदापि बुझ्न हुँदैन कि देश विकासका लागि नागरिकले सम्पूर्ण रुपले क्षति व्यहोर्नुपर्छ । राष्ट्रको नीति आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सुकुमबासीहरुलाई जग्गा दिएर घरसमेत बनाइदिने हुँदाहुँदै घरजग्गा भएका नागरिकहरुलाई सुकुमबासी बनाएर पनि भौतिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्न । जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो भने उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, घर भत्काउनु पर्ने स्थिति छ भने पनि उचित मुआब्जा दिएर घर भत्काउने काम गर्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि नेपाली नागरिक आर्थिक हिसाबले सुकुमबासी वा कमजोर नहून् । घरको सट्टा घर र जग्गाको सट्टा जग्गा पाउन सकून् ।
राज्यले यो खालको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र नागरिकहरुलाई न्याय दिँदै भौतिक विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । आज पनि धेरैजसो नेपाली नागरिकहरुले चौडा बाटोको मह¤व बुझेका छैनन् । नबुझेका जनतालाई सरकारले बुझाउनुपर्छ । भारतको काश्मीरदेखि बाटो सुविधा भएकै कारणले त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउ नेपालको चितवन हुँदै काठमाडौँ आइपुग्छ, तर बाटोको सुविधा नभएकै कारण नेपालको मुस्ताङमा फलेका रसिला स्याउ सहरबजार आइपुग्दैनन् र कुहिएर गएको अवस्था छ । यदि बाटो बनिदिएको भए मुस्ताङको ताजा स्याउ नेपाली जनताले सस्तो मूल्यमै उपभोग गर्न पाउँथे । यो अवस्था नेपाली जनताले त बुझेका होइनन् नै, नेपालका पुराना सरकारहरुले समेत बुझेनन् । त्यसको परिणामस्वरुप, आजसम्म नेपाली जनताले नेपालमै फलेका स्याउ खान पाएनन् भने भारततिरबाट आउने स्याउलाई चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अवस्था आज पनि जस्ताको त्यस्तै छ । विकास कुरा गरेरमात्रै हुँदैन, कामै गर्नुपर्छ । बाटो बनाउने कुरा गरेरमात्रै विकास हुँदैन, बाटो नै बनाउनुपर्छ । बाटो निर्माणपछि मात्र बहुआयामिक विकास हुन्छ । नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि साँघुरा बाटाहरु छन्, ती बाटाहरुलाई फराकिलो पार्नुपर्छ भने बाटो नभएका ठाउँमा उपयुक्त ढंगले बाटो निर्माण गर्नुपर्छ ।
यदि भौतिक विकासका लागि कतै निर्माण भएको घर वा ठूला बिल्डिङहरु छन् भने तिनलाई हटाउन वा भत्काउन आवश्यक परे त्यो काम गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न । कुनै बेलाको नेपालमा यतिबेला प्रयोगमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु र विमानका लागि पर्याप्त थियो । तर, जनसंख्याको वृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै मानव संख्या बढ्दा स्वाभाविक रुपले यो विमानस्थलमा चाप बढ्यो । उ बेलादेखि अहिलेसम्म एयरपोर्टको न लम्बाइ बढ्यो, न चौडाइ बढ्यो । तर, आन्तरिक र बाह्य उडानको संख्या भने पत्याउनै नसकिने तरिकाले बढ्यो । यसको परिणाम, २० मिनेटको उडानमा पुगिने गन्तव्यका लागि एयर ट्राफिक जाम भएर प्लेन आकाशमै घुमाइरहन पर्ने अवस्था आयो । यसरी आकाशमै प्लेन घुमाइरहन पर्ने अवस्था आउँदा नेपालको आन्तरिक उडान त प्रभावित भयो नै, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नकारात्मक असर पर्दा देशको गरिमामा समेत धक्का पर्न गएको छ । अब यतिबेला भएको काठमाडौँको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नधान्ने प्रस्ट देखिएको अवस्थामा समेत अर्को एउटा एयरपोर्ट बनाउनतर्फ नलागेर सरकार टोलाएको देखिन्छ । काठमाडौँभित्र वा छेउछाउमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसके देशभित्र मात्र चल्ने आन्तरिक उडानका लागि भए पनि अर्को एउटा विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्न जरूरी भएको छ । यसका लागि सरकारले खाली जग्गा खोज्ने काम थालनी गर्नुपर्छ भने यदि खाली जग्गा नभएको अवस्थामा काठमाडौँभित्रका केही बस्तीहरुलाई उचित मुआब्जा दिएर अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी सकेसम्म चाँडो विमानस्थल निर्माण गरिहाल्नुपर्छ ।
गतिलो कामको सिको जुनसुकै व्यक्ति, संस्था वा देशबाट गर्न मिल्छ । त्यही देश हो थाइल्यान्ड जसले नेपालसँगै उही दिनमा एउटा एउटा जेट विमान खरिद गरेको थियो । थाइल्यान्डले मेहनत गरेर उचित व्यवस्थापनका साथ आज झन्डै १ सयको संख्यामा जेट विमान संसारका आकाशमा उडाइरहेको छ, तर नेपालको हकमा व्यवस्थापन गतिलो नहुँदा यो देशले आजसम्म पाँचवटा जेट विमान प्रयोगमा ल्याउन सकेन । एक–दुईवटा विमान सञ्चालनमा ल्याएको छ, त्यो पनि बिग्रिने र भत्किने भइरहन्छ । आज थाइल्यान्डको उड्डयन क्षेत्रको प्रगति देख्दा र हाम्रो देशको बेहाल देख्दा सङ्लो मन हुनेहरुको मन पक्कै पनि रून्छ । देशका धेरै स्थानहरुमा विमानस्थलहरु बनेका छन्, तर प्रयोगमा ल्याउने काम भएको छैन । पञ्चायती शासनकालमा पञ्चहरुले राजालाई ढाँटेर खान्थे । यति जिल्लामा एयरपोर्ट बनेको छ सरकार भन्थे, तर हवाईजहाज चले÷नचलेको कुरा भने भन्दैनथे । कुनै बेला प्रसंग चल्दा चाँडोभन्दा चाँडो एयरपोर्टमा जहाज चल्ने बताउँथे, तर एयरपोर्ट बनाउने, बनाउँदा नाफा र कमिसन खाने तर जहाज पनि नकिन्ने, सञ्चालन पनि नगर्ने गर्थे । ३० वर्षपछि पञ्चायत ढल्यो । बहुदलीय नेताहरुले पञ्चहरुले बनाएको एयरपोर्ट हेरे, देखे तर तिनले पनि देशका विभिन्न जिल्लामा भएका एयरपोर्टमा जहाज चलाउने काम गरेनन् । जहाज चलाउने आँट वा खुबी भएन वा इच्छै भएन त्यो बेग्लै कुरा भयो, निर्वाचित भएर काठमाडौँ गएपछि बहुदलीय कोटवाला नेताहरु गाउँ फर्केरै गएनन् । संसद् भवन, मन्त्रालय, ठूला सुविधासम्पन्न होटलहरु र विदेशका सहरहरुमा नेताहरुको बास हुन थाल्यो । गाउँहरुले विकास पाएनन् ।
माओवादी युद्धले नयाँ व्यवस्था र नयाँ संविधान ल्यायो । व्यवस्था परिवर्तन भयो । सिंहदरबारबाट पुराना कुर्सीहरु फ्याँकिए । नयाँ कुर्सीहरु राखिए । पुरानो भवनमा रङरोगन गरियो । सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा पटकपटक सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुको फोटो झुन्ड्याइन्थ्यो, तिनको लाइनमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र केपी ओलीहरुको फोटो झुन्ड्याउने नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, आँट गरेर देशको भौतिक विकासका लागि काम गरिएन । पञ्च र कांग्रेसहरु उतिसाह्रो बलियो मानिएनन् भौतिक विकासका लागि, कुनै सम्झौता नगर्ने बताइने कम्युनिस्टहरु पनि लल्याकलुलुक परेको देखिँदा चाहिँ सबैलाई ताज्जुब लागेको छ । पञ्च र कांग्रेसको राजनीति भनसुन र नातावादमा टिकेको बताउने कम्युनिस्टहरु झन् आफैँ नातावादको चपेटामा परेर ध्वस्तै भएको बताउन थालिएको छ ।
जनताको काम नगर्ने, मीठोमसिनो आफूमात्रै ल्याप्पलुप्प पार्ने भनी पञ्च र कांग्रेसलाई आरोप लगाउने कम्युनिस्टका सर र म्याडमहरु आज आफैँ सुविधाभोगी भएका छन् भन्ने आरोप हिजोआज मर्ने बेला भएका पूर्वपञ्च र ओइलाएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भन्न थालेका छन् । यो अर्को खाले विडम्बना भएको छ । हुन पनि हो, आज शासनमा आएका कम्युनिस्टहरुले सानातिना समस्या पनि समाधान गर्न सकेको देखिएन । सानो उदाहरण भरतपुर एयरपोर्टलाई बनाउन सकिन्छ । भरतपुर एयरपोर्ट साँघुरो भएर उडान प्रभावित भएको खबर प्रत्येक दिन आएको छ । एयरपोर्टवरिपरिका घरहरु उडानका लागि बाधक भएको प्रतिवेदनले बताएको छ । नक्सा पास गरेर बनाएको घर भत्काउन पाइँदैन भन्ने जनताको माग जायज छ, तर अर्कोतर्फ कुनै पनि बेला भरतपुर एयरपोर्टमा हवाईजहाज दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था सबैले महसुस गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको सहज अन्त्य गर्न यतिबेलाको ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सरकारले सकेको छैन । जति घरहरु एयरपोर्टका लागि बाधक भएका छन् तिनलाई सरकारी मूल्यमा होइन, चलनचल्तीको मूल्य गरी जनतालाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य चुक्ता गरी सरकारले खरिद गर्नुपर्छ र एयरपोर्ट सहज ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यदि जनताको गल्ती वा कमजोरी थियो भने बेग्लै कुरा, जब पहिलाको नगरपालिकाले रीत पु¥याएर नक्सा पास गरिदिएर घर बनाएको अवस्थामा जनताको गल्ती तथा कमजोरी कतै नदेखिएको छर्लंग देखिएको अवस्थामा ती जनतालाई चित्त बुझाएर घरजग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा यो काम गरेको छैन भने एयरपोर्टलाई पनि यही कठिन र डरलाग्दो हालतमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । यदि एयरपोर्टलाई आवश्यक पर्ने जग्गा बढाउन सकिँदैन भने भरतपुर एयरपोर्ट अन्यत्र सार्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले भरतपुर एयरपोर्टका लागि जग्गा फराकिलो बनाउनुपर्छ वा एयरपोर्ट नै अन्यत्र सार्नुपर्छ । यी दुईमध्ये एक काम तुरून्त गर्नुपर्छ, तर शक्तिशाली बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले आजसम्म यो काम गर्न सकेको छैन ।
कतै यो शक्तिशाली सरकारलाई पनि पुराना लुते सरकारकै लाइनमा उभ्याएर हेर्नुपर्ने त होइन ? होइन भने भौतिक विकासका लागि किन लटरपटर गरेर बस्दै छ, यो कम्युनिस्ट सरकार ? काठमाडौँमा नयाँ एयरपोर्ट थप्न कसले रोक्यो ? जुम्ला, डोल्पा र मुस्ताङका स्याउ सहरबजार ल्याउन बाटो बनाउने काममा के छ अवरोध ? भरतपुर एयरपोर्ट अन्त सार्न वा जग्गा थपेर फराकिलो बनाउन प्रयास नहुनुमा के छ कारण ? जे होस्, काम गर्छु नै भन्ने चाहना राख्ने हो भने यतिबेला नेपाली जनताको भाग्यमा एकबारको जुनीमा यसपालि गतिलो बहुमतवाला सरकार छ, केपी ओली केही गर्ने खालका नेता जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि छन् । हेरौँ, यति काम यिनले गरेर देखाउँछन् कि ! यो खालको विकासका लागि यिनले खुट्टा कमाउँदैनन् कि ! वर्षौंवर्ष भौतिक विकास कुरेर बसेका नेपाली जनता अब अलिकति समय कुर्न तयार त हुनैपर्ला ।